Romantic Villa midway Bay of Fires & Wineglass Bay - I-Airbnb
Lolu hlu lungenye yezindlu ezi-5 zikanokusho zase-Saltwater Sunrise zaseWaterfront. Ama-villas angu-3 njengoba aboniswe ngenhla acishe afane futhi ama-50mts ukusuka olwandle anokubukwa kwe-panorama. I-King-bed negumbi lokugezela lesimanje, ishawa yokuhamba ngezinyawo kanye nokugeza okujulile. Amakhishi ahlanganisa umshini wokuwasha izitsha, umshini wokucindezela amasemishi, i-microwave/ihhavini/igrill ehlanganisiwe, ipani likagesi, iketela, i-toaster, umshini we-Espresso kanye ne-WebberBBQ yangaphandle. Abaphathi baqoka isabelo sakho sangempela se-villa ezinsukwini ezi-2 ngaphambi kosuku lokufika nge-SMS noma i-imeyili. I-WIFI YAMAHHALA !!!
Le Romantic Villa yakhiwe ngobuchule ukuze ibone ukubukwa kwamanzi amhlophe olwandle, ngokoqobo amamitha angu-50 ukusuka oLwandlekazini iPacific. Inomuzwa wesimanje, iwuhlelo oluvulekile futhi inikeza ama-vistas amahle kanye nobumfihlo. Ilineni elicwebileyo, amathawula amhlophe nezindlu zokugezela ezilethwe nge-shampoo, ijeli yokugeza neshawa, insipho nezinto zokugcoba kuyenza ibe ikhaya kude nasekhaya.
Ikhishi lenzelwe ukupheka ukudla okuncane kuphela, nokho lifakwe Amafutha E-Olive Engeziwe, I-Balsamic Vinegar, Salt & Pepper, 6 izinhlobo ezahlukene ze-Organic Tea, Impushana kashokoledi, i-tetrapak encane Yobisi Olugcwele Ukhilimu kanye namabhodlela angu-2 Amanzi.
I-Absolute Waterfront, I-Private kanye ne-STANDALONE VILLAS, ibekwe engadini yendabuko esogwini endaweni engamahektha ayi-10 okukhethekile e-Waterfront.
Kukhona izindawo zokudlela ezimbalwa eduze kwe-15min drive.
4.94 · 127 okushiwo abanye
I-Falmouth iyindawo enhle ogwini olusempumalanga yeTasmania.
Sinechweba elimangalisayo kanye nolwandle olukhethekile lwegobolondo olungaba ngu-500mtrs ukusuka endaweni yethu. Kubalulekile ukuvakashela le ndawo yasolwandle. Kwesinye isikhathi ungabona amahlengethwa, imikhomo nezinyoni zasolwandle eziningi ngokunethezeka kwe-villa yakho.
Ama-villas ethu anazo zonke izinqubo zokuzihlola, ngakho-ke ngeke uhlangane nathi mathupha. Nokho, uma uthanda ukuxhumana nathi singathanda ukuzwa kuwe :)
Uma kungenjalo sizoninika sonke isikhala ukuze nizijabulele niyimfihlo futhi nizimele.
Ama-villas ethu anazo zonke izinqubo zokuzihlola, ngakho-ke ngeke uhlangane nathi mathupha. Nokho, uma uthanda ukuxhumana nathi singathanda uku…